काभ्रेबाट आयो होस् उडाउने घटना, २१ वर्षीय युवती नग्न अवस्थामा रुखमा झुण्डिएको फेला (फोटो)
Posted on November 19, 2018 November 19, 2018 by Npnews
काभ्रेपलान्चोक, ३ मङ्सिर। काभ्रेपलान्चोकमा आज एक युवतीको शव फेला परेको छ । पनौती नगरपालिका–५ बस्ने २१ वर्षीया सुधा केसी नाम गरेकी युवती नग्न अबस्थामा रुखमा झुण्डिएको फेला परेकी हुन् । ब्रा र पेन्टी मात्रै लगाएर काभ्रेको बनेपा आईटीपार्क नजिकै रुखमा पासो लगाई झुन्डीएको अबस्थामा स्थानीयले देखे पछी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
सुधा काभ्रे क्याम्पसमा बिए तहमा अध्ययनरत थिइन । विहान ५ बजेतिर घरबाट क्याम्पस पढ्न हिडेकी सुधा मृत फेला परेकी काभ्रेका डिएसपी दिपक गिरीले जानकारी दिए ।
अहिले नै हत्या वा आत्महत्या भनेर भन्न नसकिने गिरीले बताए । युवतीले ब्रा र पेन्टी मात्र लगाएको र सलले पासो लगाई झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । अहिले शवलाई पोष्टमार्टमको लागि अस्पतालमा राखिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस :
एकादशी मेलामा ‘ग्याङ फाइट’ : छुट्याउन गएका प्रहरीकै टाउको फुट्यो, एक दर्जन बढी घाइते !
काठमाडौं, ३ मङ्सिर । आज एकादशीको दिन विभिन्न ठाउँमा मेला लागिरहेको छ । जहाँ युवायुवतीहरु साथीभाईसंग रम्न र मेला भर्न सहभागी भएका छन् । यसैबीच एकादशी मेला भर्न गएका दुई युवा समूहबीच झडप भएको छ ।
धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका ५ को सिम्ले भन्ने ठाउँमा गोरखा क्यामुनटार र धादिङ सुनखानीका युवाबीच गएराति झगडा भएको हो ।
झगडा साम्य पार्न गएका असई विनयकुमार पाण्डे घाइते भएका छन् । पाण्डेसहित अन्य एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
टाउकोमा चोट लागेका उनको धादिङबेँसीमा उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुवेदीले जानकारी दिए ।
मदिरा सेवन गरेका युवा समूहबीच सुरु भएको झगडाले उग्र रुप लिएपछि प्रहरी टोली साम्य पार्न घटनास्थल पुगेको थियो । मेलास्थल नजिकका पसल तथा गाडी र बाइकमा समेत तोडफोड गरिएको छ ।
‘महिला आफन्तबाटै असुरक्षित’
घोराही, ३ मङ्सिर । गत २०७४ चैत २२ गते दैलेखका एक सहोदर दाजुले आफ्नै बहिनीलाई बलात्कार गरे । पीडित बालिका रक्तश्रावका कारण बेहोश भएपछि छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । तत्काल राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा बालिकाको उपचार भयो । घोराही सिमेण्ट उद्योगमा गाडी चालक रहेका दाजुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी हाडनाता करणीसम्बन्धी मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालतले गत वैशाख २० गते पुर्पक्षमा पठायो तर अहिलेसम्म त्यसको मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन ।
आफ्नी छोरीलाई गत २०७४ चैत ३० गते आफ्नै बाबुले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले गत वैशाख २३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा जाहेरी दियोे । पटक पटक बलात्कार गरेपछि पीडित बालिकाले परिवारका सदस्यलाई कुरो लगाइन् र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिएको पीडित पक्षले जनायो । वैशाख २३ गते अभियुक्तलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी हाडनाता करणीसम्बन्धी मुद्दा चलायो । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले असार ११ गते दोषी ठहर गरी २० वर्ष कैद तथा पीडितलाई रु ४५ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला ग¥यो ।
अर्की एक किशोरीलाई गत असार ७ गते गढवा गाउँपालिका– ६ का ३० वर्षीय आफ्नै मामाले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले असार ८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय गढवामा जाहेरी दियो । घरमा कोही नभएको मौका पारी ललाइफकाई आफूलाई बलात्कार गरेको पीडित बालिकाले बताइन् । प्रहरीले अभियुक्तलाई असार ८ गते नै पक्राउ गरी अनुसन्धान थाल्यो । अदालतले असार २८ गते पुर्पक्षका लागि पठाएकामा अहिलेसम्म त्यस घटनाको मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन ।
यति मात्र नभई किशोरी नातिनीलाई आफ्नै ६८ वर्षीय हजुरबाले बलात्कार गरेको घटना प्रहरीसम्म आइपुग्यो । त्यसैगरी आफ्नै चार, छ र ११ वर्षीया नातिनीहरुलाई पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा ८२ वर्षीयविरुद्ध पनि प्रहरीमा उजुरी प¥यो ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कमा दाङमा तीन वर्षदेखि ६९ वर्षसम्मका महिला बलात्कारमा परेको उल्लेख छ । अधिकांश महिला आफ्ना बाबु, हजुरबा, दाजु, काका, मामा र छरछिमेकीबाट बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको प्रयासमा परेको घटना छन् । समाजमा अहिले किन यस्ता घटना भइरहेका छन् जहाँ एउटा महिला घरभित्र आफ्ना आफन्तबाटै सुरक्षित छैनन् । छोरीहरु घरबाहिर हिँड्नु हँुदैन ।
इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागर गत पुसदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म जिल्लामा ५१ बलात्कारका घटना भएकामा आठ वटा बलात्कार आफ्नै बाबु, दाजु, हजुरबा, मामा, भिनाजु, छरछिमेकी र झट्केलो बुवाबाट भएको जानकारी िदिनुहुन्छ । महिलाहरु टाढाका मान्छेभन्दा पनि आफन्त, छरछिमेकी र नातागोताबाट असुरक्षित देखिएका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समग्र जिल्लाको घटना हेर्दा ८० प्रतिशत बालिकाहरु यौनजन्य हिंसामा छन् । बालिका जोगाउनका लागि अव विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
उहाँका अनुसार यस वर्ष सबैभन्दा धेरै १४ वर्षका ११ बालिका बलात्कृत भएका छन् । तीन, चार, पाँच वर्षका बालिका पनि बलात्कारमा परेकामा ४२ घटनामा बालिकाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो समय बाहिर आएका यौन हिंसाका अधिकांश घटना आफन्तैबाट हुने गरेकोे पाइएको छ । यसले हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ भन्ने प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । समाज सम्पन्न भए पनि व्यवहार र मानसिकता भने पछिल्ला सार्वजनिक भएका घटनाले प्रष्ट पारेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सीता न्यौपाने अब बाटो, पुलपुलेसा बनाएर मात्र समाज समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । हाम्रो समाजका हरेक वर्गलाई अहिले सचेतनाको आवश्यकता रहेको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो “समाजलाई सचेत बनाउने सबै सरोकारवाला निकायको हो, अव सबै ससक्त रुपमा लाग्नु पर्छ ।” अधिकांश महिला हिंसासँग सम्बन्धित सचेतनाका कार्यक्रममा महिला मात्रै सहभागी हुने गरेको तथ्य प्रष्ट्याउँदै उहाँ अब महिलामाथि हिंसा गर्ने पक्षलाई पनि बढीभन्दा बढी सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जालका केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्य पनि महिलाहरु आफ्नैबाट असुरक्षित हुँदाहुँदै पनि पीडितका कुरा सुन्न कोही पनि तयार नरहेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ । घरपरिवारदेखि प्रहरी, प्रशासन, मेलमिलाप केन्द्र, सेवा केन्द्र, अदालतलगायत निकायमा महिलाको पीडा सुन्न चाहने कोही पनि नरहेको उहाँको आरोप छ । “पहिले पीडितको कुरा त सुनौँ भनेर हामीहरुले पटक पटक भनिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर सुन्नुभन्दा मिलाउन सबै तयार भैरहेका छन् । बलात्कारका घटनामा पनि मिलापत्र हुन थालेको छ ।” महिला हिंसाका घटनालाई सामान्य रुपमा लिने परिपाटी अहिले पनि उस्तै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महिला हिंसा एउटा सामाजिक अपराध हो भन्ने मान्न कोही पनि तयार नरहेको उहाँको बुझाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक राजन गौतम भने आफूहरुले महिला हिंसाको घटनालाई सामान्य रुपमा नलिएको बताउनुहुन्छ । महिला हिंसा पनि सामाजिक अपराध भएको हुँदा प्रहरीले त्यसलाई संवेदनशील रुपमा लिइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ प्रहरीसँगै मिलेर सबै सरोकार भएका निकायले अब लक्षित वर्गमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । रासस
छोराको यादले धरधरी रोइन प्रचण्ड पत्नी, प्रकाशलाई सम्झिएर प्रचण्ड पनि भक्कानिए बेस्सरी (भिडियो)
काठमाडौं, ३ मङ्सिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सुपुत्र प्रकाश दाहालको स्वर्गारोहण भएको आज ठ्याक्कै एक बर्ष पुगेको छ । यसैबीच ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा सोमबार बिहान उनको पहिलो बार्षिक स्मृति सभा आयोजनागरिएको थियो ।
स्मृति सभा कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा प्रचण्डले छोरा प्रकाश दाहालको निधनको बेला पार्टी सम्हाल्ने कि घर सम्हाल्ने भन्ने स्थिति आएको र सबैको सहयोगमा दुवै सम्हालेको स्मरण गर्दै भक्कानिएका थिए । उनले देश, जनता, नेता, कार्यकर्ताले साथ नदिएको भए आफ्नो परिवार बिघटन हुनसक्थ्यो भन्दा गला अवरुद्ध भएको थियो । त्यतिबेला उनले आँसु थाम्न सकेनन् ।
कार्यक्रमको सुरुदेखि नै प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल भावविह्वल देखिन्थिन्। मन्चमा बसेको बेला सीतालाई छोरीहरुले सम्हालि रहेका थिए।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राजपा संयोजक महन्थ ठाकुर, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरुको उपस्थिति थियो । अधिकांशका आँखा रसाएका थिए ।
प्रचण्ड र केपी ओलीको सम्बोधन हेर्नुहोस :
कार्यक्रममा प्रचण्डले दिवंगत छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानुको नामबाट खोलिएको ‘प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान’ घोषणा गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रकाश दाहालको स्मृतिमा निर्माण गरिएको स्मृति ग्रन्थ पनि सार्वजनिक भएको थियो । प्रकाशको निधनपछि नर्भिक अस्पतालदेखि आर्यघाटसम्म पुगेको युवाको भीडले आफूमा धेरै प्रकाशहरूको जिम्मेवारी रहेको महसुस भएको प्रचण्डले सुनाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्व. प्रकाश दाहालको सम्झना गरेका छन् । एक वर्ष अगाडि अर्थात आजकै दिन हृदयघातका कारण निधन भएका प्रकाशको स्मृति कार्यक्रममा उनले प्रचण्डलाई यस्तो अवस्थामा सम्हालिन गाह्रो भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकाशको निधनका बेला भएको त्यो दुःखदायी क्षण सम्झिँदै एकवर्षअगाडि आजकै दिन पत्याउन नसकिने खबर रहेको भन्दै भने, ‘प्रचण्ड र म झापा थियौं, प्रचण्डजीले बिहान फोन आयो भनेर एउटा दुःखद खबर सुनाउनु भयो । त्यो खबर पत्याउन म तयार थिइँन, तर बास्तविकता थियो त्यो । प्रचण्डजीले त्यो धैर्यता राखेर सम्हालिनुभयो ।’
सरकारले पछिल्लो १० वर्ष भित्रै विलासी गाडी खरिद गर्न ५४ अर्ब खर्चियो, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब सकियो
निकुञ्जमा भटाभट छावा जन्मिए